Clean Water – Oakkar7's Blog
On August 17, 2015 August 17, 2015 By oakkar7In biosand filter (ဇီဝသဲရေစစ်), Clean Water, Green Energy MyanmarLeaveacomment
ဤလမ်းညွှန်အား Download ရယူရန် Biosand Filter in Myanmar v1,1 download link
ရေအသက် တစ်မနက်ဟုဆိုရိုးရှိပါသည်၊ ပြီးခဲ့သည့်နွေက ပြင်းထန်လှသော အပူချိန်ကြောင့် မြန်မာပြည် တနံတလျား သောက်သုံးရေပြတ်လတ်မှုများ ကြုံခဲ့ရပါသည်၊ ပြသာနာများ မပြေလည်ခင်မှာပင် နိုင်ငံတလျား မကြုံဖူးအောင် ရေလွှမ်းမိုးမှု ဒါဏ် ခံကြရပြန်သည်၊ သဘာဝတရားကား ကျီစယ်လှောင်ပြောင်လှသည်။
ရေလွှမ်းမိုးမှု နှင့် ခြောက်သွေ့အပူရှိန်ပြင်းထန်မှု နှစ်ခုလုံးတွင် သောက်သုံးရေသည် အဓိကအခက်အခဲ တစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်၊ ရေကျသွားသော ဒေသများတွင် ရေတွင်းရေကန်များ ပျက်စီးပြီး သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ သုံးရေ မရရှိမှုကြောင့် ဝမ်းရောဂါကဲ့သို့သော ရောဂါဆိုးများ ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သတိပေးမှုများ ရှိနေသည်၊ ရေပတ်လည် ဝိုင်းနေပြီး ရေအခက်အ ခဲကြောင့် နောက်ကျိနေသောရေများ ကိုသာ သုံးစွဲနေကြသော ပြည်သူများ၏ ပုံရိပ်များက ဤအချက်ကို ထပ်လောင်းသတိပေးနေပါသည်။
ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောဒေသများ ရေအခက်အခဲရှိသောနေရာများတွင် တနိုင်တစ်ပိုင် ရေသန့်စင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို လူမှုမီဒီယာများတွင် ဝေမျှနေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်၊ တနိုင်တစ်ပိုင် ရေသန့်စင်ရာတွင် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် အဆင့်ငါးဆင့်ရှိပါသည်။
(၁) ရေအရင်းမြစ်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
(၂) ရေကို အနယ်ထိုင်စေခြင်း
(၃) ရေကို အမှုံအမွှားအနည်များ မပါအောင် စစ်ယူခြင်း
(၄) ပိုးမွှား နှင့် ဓါတ်ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားခြင်း
(၅) သန့်စင်ပြီးရေကို သန့်ရှင်းစွာ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
အဆင့် (၁)(၂)(၅) တို့ကို အထူးတလည်မရှင်းလင်းတော့ပါ၊ ရေကို စစ်ခြင်းနှင့် ပိုးမွှားကင်းအောင် အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်သော နည်းလမ်းများကိုသာ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြသွားပါမည်။
ရေကိုစစ်သည့်နည်းများမှာ အများသိကြသည့်အတိုင်း ရေစစ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် စစ်သည့်နည်းဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာဖွေပြုလုပ်နိုင်ကြပြီး စစ်ရာတွင် အသုံးပြုကြသည့် ပစ္စည်းအပေါ် မူတည်၍ သန့်စင်နိုင်မှု အနည်းနှင့်အများ ကွာခြားနိုင်ပါသည်၊ လေ့လာနိုင်ရန် နည်းလမ်းအချို့ကိုဖေါ်ပြထားပါသည်။
(၁) မြေဆွဲအားဖြင့်ရေစစ်ခြင်း (Gravity Water Filter)
အလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြစ်ပါသည်၊ လိုအပ်သလို အရွယ်အစား အကြီးအသေး ရရာပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက် နိုင်ပါသည်၊ မီးသွေး၊ ကျောက်စရစ်ခဲ၊ သဲ နှင့် ပိတ်ပါးစ စသည့် ရေစစ် အစိတ်အကျဲ သုံးဆင့်စစ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊ အသုံးပြုမည့် မီးသွေးမှာ activated carbon ဟုခေါ်သော ဖိအား၊အပူချိန်တို့ဖြင့် ပြုပြင်ထားသော မီးသွေးတစ်မျိုး အား သုံးနိုင်လျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်၊ ငါးအလှမွေးကန်များ၊ ရေသန့်စက်များတွင် အသုံးပြုကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နေရာတိုင်းအလွယ်တကူ မရရှိနိုင်ပါသဖြင့် ရရာ ထင်းမီးသွေးကို သုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။
အားနည်းချက်- ရေအနောက် ကိုစစ်ယုံသာ စစ်နိုင်သည်၊ ပိုးမွှား မဖယ်ရှားနိုင်၊ ကလိုရင်းကဲ့သို့ဆေးခတ်ခြင်း (သို့) ဆူပွက်အောင် ကြိုချက်ပြီးမှသာ သောက်သုံးသင့်သည်။
(၂) ဇီဝသဲရေစစ်ဖြင့်ရေစစ်ခြင်း (Biosand Water Filter)
ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter)ဆိုလို့ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး အဆင့်မြင့်နည်းပညာလို့ မထင်စေလိုပါ၊ မူရင်းတီထွင်သူများက ပေးထားသောနံမည်သာ ဖြစ်ပါသည်၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်၊ လိုအပ်သော ပစ္စည်း ကရိယာများ ရနိုင်လျင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်၊ ဇီဝသဲရေစစ် (BSF) ကို ၁၉၈၀ တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ Calgary တက္ကသိုလ်မှ Dr. David Manz ကစတင် အကြံပြုခဲ့ပြီး ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည့် သဲဖြင့် ရေစစ်သည့်နည်းလမ်းကို ထပ်မံ၍ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့သော နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်၊ ကနေဒါမှ အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် CAWST မှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး မဖွံ့ဖြိုးသေးသော နိုင်ငံများတွင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
၂-၁ ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter)ဆိုသည်မှာ
ရေကိုဖြည်းညှင်းစွာစစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရေကိုဖြည်းညှင်းစွာ ကျဆင်းစေရန် ရေစိမ့်ကန် တစ်ခုပါရှိပြီး ရေစစ်ကန်အားအောက်တွင်ထားရှိသည်။
သဲရေစစ်အမျိုးအစားပင်ဖြစ်သ်ေလည်း ထူးခြားချက်မှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဇီဝရေစစ်လွှာ (biological activity layer) တစ်ခုအား ဖန်တီးပြီး ဘက်တီးတီးယား နှင့် ပိုးမွှားများအား (၉၀%နှင့်အထက်) ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အောက်မှ အပေါ်သို့ ပြန်တပ်ဆင်ထားသော ရေပြန်ပိုက်ကြောင့် အနည်ကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
၂-၂ ဇီဝရေစစ်ကန် တည်ဆောက်ပုံ
ပုံ-၂ ဇီဝရေစစ်ကန် ၏ တည်ဆောက်ပုံ
စံနစ်တကျတည်ဆောက်ထားသော ဇီဝရေစစ်ကန်၏ အတိုင်းအတာများကို အောက်ပါပုံတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်၊ အချိန်ရလျင် သတ်မှတ်အတိုင်းအတာ အဆင့်များအတိုင်း တည်ဆောက်နိုင်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြုံတွေ့ရလျင် ရနိုင်သ၍ ပစ္စည်းများဖြင့် ညဏ်ရှိသလို တည်ဆောက်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်နည်း အသေးစိတ် နှင့် ကိုးကား နည်းပညာ ဆိုင်ရာ လက်စွဲများအား၏ ရယူရန် ဒေါင်းလဒ်လင့်များအား နောက်ဆုံးတွင် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
ပုံ-၃ ဇီဝရေစစ်ကန် ၏ စံအတိုင်းအတာများ
၁. သဲ(အနုရလျင် ပိုကောင်းသည်) တစ်အိတ်ခန့်
၂. ကျောက်စရစ်ခဲ ငါးမူး နှင့် တမတ်ဆိုဒ် နှစ်ပြည်ခန့်စီ
၃. သန့်ရှင်းသော အဝတ်စ
၄. တမတ်ဆိုဒ် ရေပိုက် ၄’ ခန့် (ရေပြန်ပိုက်ပြုလုပ်ရန်)
၅. ရေစိမ့်ပြားပြုလုပ်ရန် ပလတ်စတစ်ပြား၊ ကော်ပြား၊ သွတ်ပြား (သုံးမည့် အောက်ခံပလတ်စတစ်ပုံးအား ကာမိမည့်အရွယ်အစား)
၆. ရေပုံး၊ရေအိုး × ၂ လုံး (အရှည်ရနိုင်လျင်ပိုကောင်း)
၇. ၁/၈” ဆိုဒ် စူးသွား(သို့) အိမ်ရိုက်သံ (ရေစစ်ပေါက်ဖေါက်ရန်)
အသုံးပြုမည့်သဲ သည်အရေးအကြီးဆုံး ပစ္စည်းဖြစ်သည်၊ သဲရရှိမည့် နေရာကို သေချာရွေးချယ်နိုင်လျင် ပိုကောင်းသည်၊ ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး သဲပွင့်အကြီးအသေး အရွယ်မျိုးစုံပါဝင်သော သဲသည် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျောက်ခွဲရာမှ ထွက်လာသော သဲ+ကျောက်အရောသည် ပိုးမွှားပါဝင်နိုင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ နေရာတိုင်းအလွယ်တကူ ရရှိရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။
ကုန်းတွင်းသဲခေါ် သဲကုန်းသဲမြေများမှ ရရှိသော သဲသည် ဒုတိယဦးစားပေး အဖြစ် သုံးနိုင်ပါသည်၊ ပိုးမွှားပါဝင်နိုင်မှု ရှိနိုင်သည်။
မြစ်သဲ ခေါ် မြစ်အတွင်းမှ ရရှိသော သဲသည် တတိယဦးစားပေး အဖြစ် သုံးနိုင်ပါသည်၊ ပိုးမွှားပါဝင်နိုင်မှု ရှိနိုင်သည်၊ မြစ်ကမ်းပါးနှစ်ဖက်သဲသောင်များမှထုတ်ယူသော သဲ ကိုသာရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်သည်၊ မြစ်လည် ရေအတွင်းမှ ထုတ်ယူစုတ်ယူသော သဲသည် လူနှင်တိရိစ္ဆာန်တို့၏ အညစ်အကြေးများမှ ပိုးမွှားများ၊ အရွက်အပင်များမှ အော်ဂဲနစ်အကြွင်းအကျန်များ ပါရှိနိုင်သည်။
ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှ သဲများမှာ ဆားဓါတ်ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုရန် မသင့်တော်ပါ။
၂.၄ ရေစိမ့်ကန် (Diffuser)
ရေစိမ့်ကန်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေကို ဖြည်းညှင်းစွာ ကျဆင်းစေရန် နှင့် အောက်ခဲသဲလွှာ အပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အနုဇီဝလွှာကို ရေကျခြင်းကြောင့် အနေအထားမပျက်စေရန် ကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်၊ ရေဆင်းနှုံး မှန်ကန်စေရန် အပေါက်များဖေါက်ရာတွင် တိကျစေရန် အထူးဂရုပြုရပါမည်။
အရွယ်အစားမှာ ၁၂ လီတာ ဝင် (သို့) ပုံမှန်ရေ ပုံးတစ်ပုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ ရေစိမ့်ကန်နှင့် အောက်ခံရေစစ်ကန် သည် ပုံးရှည် တစ်ပုံးထဲဖြစ်စေ သီးခြားပုံး နှစ်ပုံးဆင့်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရေစိမ့်ကန် ၏ အောက်ခြေတွင် ၁/၈” အရွယ် ရေစိမ့်ပေါက်လေးများအား (၁/၈” ဆိုဒ် စူးသွား(သို့) အိမ်ရိုက်သံဖြင့်) ၁” စီခွာ၍ ဖေါက်ရမည်။
ရေစိမ့်ကန်နှင့် အောက်ခံရေစစ်ကန် သည် ပုံးရှည် တစ်ပုံးထဲဖြစ်လျင် ရေစစ်ပြားတစ်ပြား ကြားခံရန်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုမည် ပလတ်စတစ်ပြား၊ ကော်ပြား၊ သွတ်ပြား အားလည်း အလားတူ ဖေါက်ပေးရန်လိုပါသည်။
ပုံ-၄ ရေစစ်ကန် နှင့်ရေစစ်ပြား အပေါက်အရွယ်အစား
ပုံ-၅ ပလတ်စတစ်(သို့) သွတ်ပြားအား ရေစိမ့်ပေါက်ဖေါက်ထားပုံ
၂.၅ ရေစစ်ကန် (Biosand Filter)
ရေစစ်ကန် ၏ အရွယ်အစားမှာ အဝ(အလျား×အနံ) ၁’ × ၁’ ၊ ၂၈” အမြင့် ရှိသင့်ပါသည်၊ မရရှိနိုင်လျင်လည်း ရနိုင်သရွေ့ ရေပုံးအရှည်၊ ရေအိုးစသည်များ ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်၊ မူရင်းဒီဇိုင်းတွင် ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပုံလောင်းပြီး တည်ဆောက်ထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင် မြေအိုးများကို အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်၊ လေ့လာနိုင်ရန် တည်ဆောက်ပြီး ရေစစ်ကန်များ အားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊ အရေးအကြီးဆုံးမှာ အနည်းဆုံးသဲထု မှာ ၂၀” ထက်မနဲရန်ဖြစ်ပါသည်။
ရေစစ်ကန်၊ ရေစိမ့်ကန်များကို သေချာစွာ ဖုံးအုပ်ထားရမည်၊ အဖုံးသည် အသား၊သွပ်ပြား၊ပလတ်စတစ် စသည်ဖြင့် ရာသီဥတုဒါဏ် ခံနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အလင်းရောင် နေရောင် မဝင်သော ပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်ရမည်။
ပုံ-၆ နမူနာရေစိမ့်ကန်နှင့်ရေစစ်ကန်များ တပ်ဆင်ထားပုံ
အသုံးပြုမည့် ကျောက်စရစ်၊ သဲစသည်တို့ကို ၁/၄”, ၁/၂” အရွယ်အစားအတိုင်း ဇကာဖြင့်တိုက်ပါ၊ (တိုက်ရန်မလွယ်ပါက လက်ဖြင့် တတ်နိုင်သရွေ့ ရွေးပါ)၊
သဲကိုလည်း ပန်းရန်သုံး သဲဇကာ( ၀.၇ မီလီမီတာ သို့ ၀.၀၃”, #၂၄ ဆိုဒ်ဇကာ) ဖြင့်တိုက်ပါ၊ မည်သည့်အမှိုက်သရိုက်မျှ မပါစေရန် သေချာစွာ စစ်ပါ။
အသုံးပြုမည့် ကျောက်စရစ်၊ သဲစသည်တို့ကို သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် သေချာစွာဆေးပါ၊ Biosand ဇီဝရေစစ်သည် အဓိကအားဖြင့် သဲကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်၍ သဲ ရေဆေးရာတွင် မှန်ကန်သော အချိန်အဆရရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ (ရေပြောင်နေအာင်မဆေးရပါ၊ အဆေးလွန်သွားလျင် ရေမစစ်နိုင်တော့ပဲ အသုံးပြုမရတော့ပါ)၊ ရေတစ်ကြိမ်ဆေးပြီးတိုင်း ဖန်ပုလင်းတစ်လုံးတွင် သဲ+ရေ ဆတူထဲ့ပြီး လှုပ်ပါ၊ အလှုပ်ရပ်ပြီးလျင် စားပွဲပေါ်တင်ပြီးကြည့်ပါ၊ ၃~၄ စက္ကန့်အတွင်း ရေအောက်ခြေ သဲထုကို မြင်နိုင်လျင် ရပ်ပါ။ ပုံ-၇ တွင်ပြထားပါသည်။
ရေဆေးပြီး သဲ၊ ကျောက်များကို အခြောက်ခံပါ (ရေစစ်အား ပထမဆုံးတပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် အချိန်တွင် ရေစစ်နှုံးချိန်ညှိသည့် အချိန်တွင် ရေခြောက်နေမှ မှန်ကန်ပါမည်၊ နေလှန်းခြင်းသည် အသုံးပြုပစ္စည်းများ ပိုးမွှားကင်းအောင် အကူအညီပေးသည်။)
ရေတစ်ပုံးကို ကျောက်၊သဲများ မစီထဲ့ခင် အရင်လောင်းထည့်ပါ။
ပုံ(၈) ပါအတိုင်း ကျောက်စရစ်ကြီး၊သေး၊ သဲ၊ ရေပိုက် တို့ကို တစ်လွှာခြင်းခင်းပါ၊ ညီအောင်ညှိပေးပါ။
ပုံ- ၈ ရေစစ်လွှာများနှင့် ရေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ပုံ
ရေပြန်ပိုက်ကို ရေအလွှာပါးနှင့် မျက်နှာပြင်ညီအောင် ပုံ(၉) ပါအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ၊ (ရေထွက်နိုင်ရန် ဆိုင်ဖွန် siphon effect ရရန်ဖြစ်ပါသည်)
ရေပိုက်အား အတွင်းမှဖြစ်စေ အပြင်မှဖြစ်စေ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်၊ ပိုက်အရွယ်အစား(အတွင်းဆိုဒ် ၁/၄” ပလတ်စတစ်ပိုက်၊ ကြေးပိုက်) နှင့် အနေအထားသာ အရေးကြီးပါသည်။
ပုံ-၉ ရေပြန်ပိုက် (သို့) ရေထွက်ပိုက်တပ်ဆင်ပုံ
နောက်ထပ် ရေတစ်ပုံးထပ်လောင်းထဲ့ပါ၊ ရေဖြည်းဖြည်းခြင်းစိမ့်သွားပြီး (၄၅မိနစ်မှ ၁နာရီခန့်အကြာ) ရေပြန်ပိုက်မှ ရေများထွက်လာမည်၊
ရေကျခြင့်းရပ်သွားလျင် သဲထု နှင့် အပေါ်ဆုံးရေလွှာအမြင့်မှာ ၂” ရှိရပါမည်၊ မရှိလျင် ပိုက်အနေအထား သဲအမြင့်တို့ကို သေချာစွာ ပြန်လည်ချိန်ညှိပါ (ဤအဆင့်သည် အရေးကြီးပါသည်၊ ရက်အနည်းငယ်ကြာလျင် သဲထု အပေါ်ဆုံးတွင် လူကိုအန္တရယ်မပြုသော၊ ရေထဲမှ အန္တရယ်ရှိပိုးမွှားများကို တားဆီးနိုင်သော အနုဇီဝအလွှာ (schmutzdecke or biolayer) တစ်ခု ပေါက်ပွားလာမည်ဖြစ်ပြီး ရေလွှာ အမြင့်သည် မှန်ကန်မှသာ ထိုအလွှာဖြစ်ပေါ်မှုကို ထောက်ပံ့ထိန်းသိမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်)။
ရေထွက်ပေါက်မှ ရေဆင်းနှုံးကို ရေသန့်ဗူးသေး တစ်ဗူးဖြင့်တိုင်းတာပါ၊ ပုံမှန် ရေသန့်ဗူး တစ်ဗူးသည် ၁ လီတာရှိပြီး ရေစစ်နှုံးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၀၀ မီလီလီတာ/မိနစ် (၁၀၀၀ မီလီလီတာ = ၁ လီတာ) ရှိပြီး ရေသန်ဗူးပြည့်ရန် ၂ မိနစ် ၃၀ စက္ကန့် ခန့်ကြာပါလိမ့်မည်။
ရေစစ်နှုံး သည် ၃ မိနစ်ခွဲထက် ပိုကြာပါက အသုံးပြုသည့် သဲသည် လိုအပ်သလောက်ဆေးထားခြင်း မရှိ၍ သဲအလွှာ ကိုပြန်လည်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရေစစ်နှုံး သည် ၂ မိနစ် ၁၀ စက္ကန့်ထက် ပိုမြန်နေပါက အသုံးပြုသည့် သဲသည် လိုအပ်သည်ထက် ဆေးထားမိပြီး သဲအလွှာ ကို လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပုံ ၁၀ ရေစစ်နှုံးစစ်ဆေးပုံ
စတင်အသုံးပြုလျင် ရေ ၁ ပုံးကို ဦးစွာထည့်စစ်ပါ၊ အထွက်ပိုက်မှ ရေထွက်ခြင်း ရပ်သွားလျင်
နောက်တစ်ပုံးထည့်၍ စစ်ပါ၊ ရေ ၁၀ ပုံးခန့်ကို စစ်ထုတ်ပြီး အထွက်ရေ ကြည်လာသည်အထိ စစ်ထည့်ပါ၊
ပိုးမွှားများအားဖမ်းယူဖယ်ရှားခြင်း (Mechanical Trapping and Stick in Sand Filter)
အချိူ့သော ပိုးမွှားများနှင့် အညစ်အကြေးများ အရွယ်အစားမှာ သဲထုအတွင်း ဖြတ်သန်းမသွားနိုင်ပဲ စစ်ထုတ်ထားနိုင်သည်။
ပိုးမွှားများအားသဘာဝအတိုင်း အခြင်းခြင်း ဖမ်းယူဖယ်ရှားစေခြင်း (Predation)
အနုဇီဝအလွှာ (biolayer) အတွင်းတွင် အချို့ပိုးမွှားများသည် အခြင်းခြင်း သဘာဝအတိုင်း ဖမ်းယူစားသောက်စေခြင်းဖြင့် စစ်ထုတ်ထားနိုင်သည်။
ပိုးမွှားများအားသဘာဝအတိုင်းသေဆုံးစေခြင်း (Nautral Death)
အချိူ့သော ပိုးမွှားများသည် ရေစစ်အတွင်း အစာရေစာ၊ အလင်းရောင် နှင့် အောက်ဆီဂျင် ပြတ်တောက်ပြီး သဘာဝအတိုင်းသေဆုံးစေခြင်းဖြင့် စစ်ထုတ်ထားနိုင်သည်။
အနုဇီဝအလွှာ (schmutzdecke or biolayer) ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
စတင်အသုံးပြုပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာလျင် သဲထု အပေါ်ဆုံးတွင် လူကိုအန္တရယ်မပြုသော၊ ရေထဲမှ အန္တရယ်ရှိပိုးမွှားများကို တားဆီးနိုင်သော အနုဇီဝအလွှာ (schmutzdecke or biolayer) တစ်ခု ပေါက်ပွားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
အနုဇီဝအလွှာ ဖြစ်ပေါ်ရန် စတင်အသုံးပြုသည်မှ ၁၀~၃၀ ရက်ထိကြာပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ပထမဆုံး စတင်အသုံးပြုသည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရေသန့်စစ်စစ်ရဦးမည် မဟုတ်ပါ၊ (ကလိုရင်းခတ်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)။
ဤ အနုဇီဝအလွှာအား မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ၊ သဲထုအပေါ်ဆုံးရှိ အစိမ်းရောင် အလွှာပါးမှာ အနုဇီဝအလွှာ မဟုတ်ပါ။
ကောင်းမွန်သော ဇီဝအလွှာသည် အန္တရယ်ရှိပိုးမွှားများကို (pathogens, bacteria) ၉၉% တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်၊ (ဤအလွှာ ကောင်းစွာမဖြစ်လျင်လည်း အမှုံအမွှား များနှင့် အချို့သော ပိုးမွှားများကို ၃၀~၇၀% ထိဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိပါသေးသည်)။
ဖြစ်နိုင်သရွေ့ အရောင်အဆင်းကင်းမဲ့ ကောင်းမွန်သော ရေအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုပါ၊ ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter) သည် ရေ၏ အရောင်ကို ရာနှုံးပြည့် ဖယ်ရှားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ၊ ဤရေစစ်၏ ရည်ရွယ်ချက် သည် အမှုံ နှင့် အန္တရယ်ရှိပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် ဖြစ်ပါသည်၊ အနယ်ကျရန် မဟုတ်ပါ။
အနယ်အနှစ်များပါသောရေကို မသန့်စင်မှီ အနယ်ထိုင်အောင် ထားပြီးမှ စစ်ပါ၊ အနယ်များလွန်းသော ရေကို သုံးလျင် ရေစစ်များအား ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းသန့်ရှင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်၊
ရေကိုအနယ်ကျစေခြင်း (Sedimenting) ဖြင့် အမှိုက်သရိုက်၊ အမှုံအမွှားများ နှင့် ပိုးမွှားအချို့အား (၅၀%ခန့်) ပထမအဆင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
ကလိုရင်းခတ်ထားပြီးသောရေကို ရေစစ်ထဲမထည့်ပါနှင့်၊ ကလိုရင်းသည် ဇီဝအလွှာကို ပျက်စီးစေပါလိမ့်မည်။
တစ်မျိုးထဲသော ရေအရင်းအမြစ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ၊ ရေစစ်၏သန့်စင်နိုင်စွမ်းသည် သုံးစွဲချိန်နှင့်အမျှ တက်လာပါမည်၊ ရေအရင်းအမြစ်ပြောင်းသွားပါက ရေစစ်၏သန့်စင်နိုင်စွမ်းပြောင်းသွားပြီး တဖန်ပြန်၍ အချိန်ယူရပါလိမ့်မည်။
အနုဇီဝအလွှာနှင့်အနားပေးချိန် (Biolayer and Pause Period)
အနုဇီဝအလွှာ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်၊ ပိုးမွှားဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းမှာ ရေစစ်ကို တကြိမ်စစ်ပြီးတိုင်း တကြိမ်အနားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ရေစစ်အသုံးပြုပုံကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ပါမှ ရေစစ်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ပိုးမွှားဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း အကောင်းဆုံးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အနားပေးချိန်မှာ အနည်းဆုံး ၁ နာရီမှ အများဆုံး ၄၈ နာရီ ဖြစ်ပါသည်၊ ရေတစ်ပုံးစစ်ပြီးတိုင်း အနည်းဆုံး ၁ နာရီအတွင်း နောက်တစ်ပုံးမထဲ့ရန်နှင့် အများဆုံး ၄၈ နာရီမတိုင်မှီ နောက်တစ်ပုံး ထည့်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ရေတစ်ပုံးနှင့် တစ်ပုံး တနာရီထက်နီးကပ်လျင် အနုဇီဝအလွှာတွင်းမှ ပိုးမွှားများသည် သန့်စင်မည့်ရေမှ ပိုးမွှားများအား ဖမ်းယူစားသောက်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၄၈ နာရီကျော်သွားလျင်လည်း အနုဇီဝအလွှာတွင်းမှ ပိုးမွှားများအများစု အစာရေစာပြတ်လတ်ပြီး သေဆုံးသွားကာ အလွှာ၏အလုပ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်၊ အနုဇီဝအလွှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရက်အနည်းငယ်ထပ်မံ၍ ကြာပါလိမ့်မည်။
ရေစစ်အား အသုံးမပြုပဲ အချိန်ကြာမြင်စွာ မထားသင့်ပါ၊ တရက်လျင် နှစ်ကြိမ်ခန့် ပုံမှန်အသုံးပြုသင့် ပါသည်။
၂.၁၀ ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter) အားထိန်းသိမ်းသန့်စင်ခြင်း
ဇီဝသဲရေစစ် (BSF) ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေကြောင်း စစ်ဆေးရန် အချက်(၈)ချက် (8 Operating Parameters) ရှိပါသည်။
၁. ရေစစ်အား တပ်ဆင်အသုံးပြုရက်မှာ ရက် ၃၀ ကျော်လွန်ခြင်း
၂. တစ်ရက်လျင် တစ်ကြိမ် မှန်မှန် အသုံးပြုခြင်း၊ တစ်ကြိမ်ကျော်လျင် အနားပေးချိန် မှန်ကန်ခြင်း
၃. ရေစစ်တွင် ထည့်သောရေအား မထည့်ခင် အနည်ထိုင်စေပြီးမှ စစ်ခြင်း
၄. ရေစစ်ကန်၊ ရေစိမ့်ကန်များ မကွဲမအက်၊ ကောင်းမွန်စွာ ရှိခြင်း
၅. ရေစိမ့်ကန်၊ ရေစစ်ပြား များ မကွဲမအက်၊ ကောင်းမွန်စွာ ရှိခြင်း
၆. ရေစစ်ပြီးချိန်တွင် သဲလွှာအထက် တင်ကျန်ခဲ့သော ရေအလွှာမှာ ၂” ရှိခြင်း
၇. သဲလွှာအထက်မျက်နှာပြင်မှာ အချိုင့်အပေါက်များ မရှိပဲ ညီညာနေခြင်း
၈. ရေစစ်နှုံးမှာ တစ်မိနစ်လျင် ၄၀၀ မီလီလီတာ နှင့်အောက်သာ ရှိခြင်း
ဤအချက်(၈)ချက် ပြည့်စုံလျင် ရေစစ်သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နေသည်။
၁) ရေစိမ့်ကန်၊ ရေစိမ့်ပြားတို့ကို တစ်ပါတ်လျင်တစ်ကြိမ် ဆပ်ပြာရေဖြင့် ဆေးကြောပေးသင့်သည်၊ စစ်ပြီးရေသန့်ကို သုံးရန်မလိုပါ၊ ရနိုင်သ၍ ရေကြည်ဖြင့်သာဆေးနိုင်ပါသည်။
၂) ရေထွက်ပိုက် ကို လည်း တစ်ပါတ်လျင်တစ်ကြိမ် စစ်ပြီးရေသန့်၊ ဆပ်ပြာရေတို့ဖြင့် ဆေးကြော ပေးသင့်သည်၊
ရေအထွက်နှုံး အလွန်နှေးလာလျင် (Swirl and Dump)
ရေထွက်နှုံးနှေးလာခြင်းမှာ သဲရေစစ်အပေါ်ဆုံးရှိ အနုဇီဝအလွှာထူလာခြင်းနှင့် အနည်ပါသောရေညစ်၊ ရေဝါများကို နေ့စဉ်စစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ သတိပြုရန်အချက်မှာ သဲလွှာပေါ်ရှိ သာမန်မျက်စိနှင့် ကြည့်လျင် မြင်ရသော အညစ်အကြေးလွှာထဲတွင် အနုဇီဝအလွှာ ရှိနေပြီး ရေစစ်နှုံးနှေးလာလေ ရေစစ်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ပိုးမွှားဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း အကောင်းဆုံးရှိလေ ဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ရေထွက်နှုံး အလွန်နှေးလာမှသာ ဤအဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
၁) ရေစိမ့်ကန်၊ ရေစိမ့်ပြားကိုဖယ်ပါ။
၂) ရေစစ်ကန်ထဲသို့ ရေအပြည့်ဖြည့်ပါ။
၃) အပေါ်ယံသဲအလွှာပြင်ကို လက်ဖြင့်မွှေပါ၊ အပေါ်အောက်လှန်ခြင်း လက်ဖြင့်ထိုးဆွခြင်းမလုပ်ပါနှင့်၊ အပေါ်ယံအနယ်ပြင်ကိုသာ အနာယ်ထအောင် ရှပ်မွှေပါ။
၄) ရေနောက်များ ကိုခွက်သေးတစ်ခွက်ဖြင့် ခတ်ထုတ်ပြီးသွန်ပါ။
၅) သဲပြင်ကို ညီအောင်ညှိပါ။
၆) ရေစစ်ပြား၊ကန် ကို ဆေးပြီးပြန်တပ်ပါ။
၇) ရေတစ်ပုံးထည့်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းရေစစ်ကာ ရေစစ်နှုံးကိုကြည့်ပါ။
၈) ရေစစ်နှုံး မမြန်သေးလျင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ပါ။
၉) ရေစစ်နှုံး မြန်သွားလျင် လက်ကို ဆပ်ပြာ၊ ရေသန့်ဖြင့် သေချာဆေးပါ။
ပုံ-၁၁ သဲလွှာပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးလွှာ မွှေပြီးသွန်ပုံ
(၃) ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter) ၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ၊ ရလာဒ်များ
ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter) ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်၊ ပိုးမွှားဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း စစ်ထုတ်နိုင်စွမ်းမှာ ရေစစ်ကို တည်ဆောက်မှု၊ တပ်ဆင်မှု ၊ နည်းလမ်းတကျ အသုံးပြုမှုအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။
ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter)သည် မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်အသုံးပြုလျင် ကပ်ပါးကောင်နှင့် သံကောင်၊ တုတ်ကောင် (protozoa and worms) များကို ၁၀၀% ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter)သည် မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်အသုံးပြုလျင် ပိုးမွှား (bacteria) များကို ၉၈% ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter)သည် မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်အသုံးပြုလျင် အန္တရယ်ရှိပိုးမွှား (virus) များကို ၇၀% ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
သံဓါတ်ပါဝင်မှုအားလည်း ၉၀~၉၅% ထိဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
ဇယား(၁) တွင် ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသတ်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ကွင်းဆင်း စမ်းသတ်ခြင်းများ၏ ရလာဒ်များကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Bacteria Viruses Protozoa Helminths Turbidity Iron
စမ်းသတ်ခြင်း Up to
98.5% 70 to
>99.9%5 Up to 100%6 95% <1 Not available
လက်တွေ့ကွင်းဆင်း စမ်းသတ်ခြင်း 87.9 to 98.5% Not available Not available Up to 100%6 85% 90-95%
၃.၁ ဇီဝသဲရေစစ် (Biosand Filter) ၏ အားနည်းချက်များ
WHO (World Health Origination) ၏ သန့်စင်သော သောက်ရေသတ်မှတ်ချက်မှာ ၁၀၀% ပိုးမွှားကင်းစင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်၊ စိတ်ချရသော ရေသန့်ဖြစ်ရန် ဇီဝသဲရေစစ်ဖြင့် စစ်ပြီးရေအား ထပ်မံပိုးမွှားသတ်ရန် (Disinfect) လိုအပ်ပါသည်၊ ကလိုရင်းဆေးခပ်ခြင်း၊ ဆူပွက်အောင်ကြိုချက်ခြင်း၊ SODIS (နောက်တစ်ပိုင်းတွင် အသေးစိတ်ရေးပါမည်) နည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အော်ဂဲနစ်ဓါတ်ပေါင်းများ၊ ဓါတုပစ္စည်းများ၏ ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု၊ ရေစေးခြင်း တို့ကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ဤ ဇီဝသဲရေစစ်၏ ထူးခြားချက်မှာ မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်မှု နှင့် မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုမှု အပေါ်တွင် များစွာ မူတည်ပါသည်၊ ဤစာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူရင်းစံနစ်တကျတည်ဆောက်မှု နည်းလမ်းများကို မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းစွာတင်ပြလိုရင်း ဖြစ်သဖြင့် အချို့သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။
မူရင်းလမ်းညွှန်များတွင် အတိအကျတစ်ဆင့်ခြင်းတည်ဆောက်နည်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ၊ ဆာဗေးအချက်အလက်များ၊ စံနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနည်း များကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထား၍ မဖြစ်မနေ လေ့လာကြည့်ရှုကြပါရန် နှင့် မိမိတို့ရေမြေ သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီသော နည်းလမ်းများကို ပိုမိုဖေါ်ထုတ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
လက်တွေ့အသုံးချနေသူ တည်ဆောက်သူများမှလည်း မိမိတို့၏ တွေ့ရှိချက်များ ကို ပြန်လည်မျှဝေ ကြပါရန်နှင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများ၊ လေ့လာသူများမှ နည်းလမ်းများကို အကြံပြုပြသရှင်းလင်းပေးကြပါရန်၊ တက္ကသိုလ်ကောလိတ်များမှ ကျောင်းသား/သူများ၊ Researcher များအနေနှင့်လည်း Field တစ်ခုအနေနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် (မူရင်းနည်းပညာမှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏ research ဖြစ်ပါသည်) မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။
အပိုင်း(၂) တွင် လွယ်ကူစွာ ပိုးမွှားသတ် (Disinfect) လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရေးသားပါမည်။
မူရင်းနည်းပညာလမ်းညွှန်၊ လက်စွဲများ Download ရယူရန်
က) ဇီဝသဲရေစစ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာလက်စွဲ (Biosand Filter Manual)
ခ) ဇီဝသဲရေစစ်တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန် (Biosand Filter Construction Manual)
ဂ) ဇီဝသဲရေစစ်နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန် (Biosand Filter For Technicians)
Biosand Filter for Community Driven Development Project by Oak Kar (oakkar7.wordpress.com) is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License . To viewacopy of this license, visit
This work and document are based onawork at www.cawst.org. the original document version can be found at,
Share – to copy, distribute and transmit this document
Remix – to adapt this document
You must give credit to CAWST as the original source of this document (but not in any way that suggests that CAWST endorses you or your use of this document).
Credited to –
All photos and images owners which used in this document
12, 2916 – 5th Avenue, Calgary, Alberta, T2A 6K4, Canada
phone: + 1 403.243.3285 ▪ fax : + 1 403.243.6199
email: cawst@cawst.org ▪ website: http://www.cawst.org
CAWST isaCanadian non-profit organization focused on the principle that clean water changes lives. Safe water and basic sanitation are fundamentals necessary to empower the world’s poorest people and break the cycle of poverty. CAWST believes that the place to start is to teach people the skills they need to have safe water in their homes. CAWST transfers knowledge and skills to organizations and individuals in developing countries through education, training and consulting services. This ever expanding network can motivate individual households to take action to meet their own water and sanitation needs.
One of CAWST’s core strategies is to make knowledge about water common knowledge. This
is achieved, in part, by developing and freely distributing education materials with the intent of increasing its availability to those who need it most.
This document is open content and licensed under the Creative Commons Attribution Works
3.0 Unported License. To viewacopy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or sendaletter to Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Attribution. You must give credit to CAWST as the original source of this document (but not in any way that suggests that CAWST endorses you or your use of this document).
CAWST and its directors, employees, contractors, and volunteers do not assume any responsibility for and make no warranty with respect to the results that may be obtained from the use of the information provided.
Under ideal circumstances, the biosand filter can produce high quality drinking water. However, this cannot always be assured or guaranteed due to variations in the construction, installation, operation and maintenance of the filter. CAWST shall not be liable to anyone whatsoever for any damage resulting from reliance on any information provided in this document or attachments thereto. This also applies to the consumption of water from the biosand filter. It should also be noted that the biosand filter cannot be upon to remove certain or all forms of water contamination.